ကွန်ဒိုများ အတွက် ငှားရန်
4 အိပ်ခန်းများ ကွန်ဒို ငှားရန် အတွင်း Tamwe, Yangon
Yangon, Tamwe, Tamwe
Rent: Lks 16 / လ
( Min.6လများ contract )
ပိုင်ဆိုင်မှု အိုင်ဒီ: 3619942
သွားလာရလွယ်ကူ၍ အချက်အချာကျသော မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်အတွင်း အိမ်ခန်း၊ ရုံးခန်းလုပ်နိုင်သည့် ကွန်ဒိုအခန်းငှါးရန်ရှိပါသည်။???????????? ယုဇနပလာဇာ၊ ကန်တော်ကြီး စသည်တို့နှင့် နီး၍ အလွန်အချက်အချာကျပါသည်။???????????? ငှါးရမ်းသူ (customer) ဘက်မှ အကျိုးဆောင်ခ တစ်ပြားတစ်ချပ်မှ ပေးရန်မလိုပါ။ ????????????
We haveadecent room to rent near Kandawgyi lake. ???????????? Tenants are not charged for brokerage fees.????????????
Very decent deal ????????????
Price - USD 1100 or MMK 16lakhs/month
Condo Name - Lamin Thar Yar Condo
Location - Mingalar Taung Nyaunt, Close to Kandawgyi lake
Width - 2100sqft????????????
Room - 1Master, 3single, living, dining, kitchen, bath rooms
Furnitures -5ACs, TV, sofa sette, water heater, washing machine, bath tub,3beds,3mattresses, refrigerator, oven, cupboards, kitchen smell eater
Condo facilities - lifts, parking, 24hr security, rubbish collect system, elecricity generators
Other searches in Tamwe
ရောင်းရန်ပိုင်ဆိုင်မှု အတွင်း Tamwe
ရောငျးရနျကှနျဒို အတွင်း Tamwe
ရောင်းရန်အိမ် အတွင်း Tamwe
ငှားရန်ပိုင်ဆိုင်မှု အတွင်း Tamwe
ငှားကှနျဒို အတွင်း Tamwe
ဤပရောဂျက်ကို Nay Linn Ko The information contained in this listing formsaproperty advertisement of which dotproperty.com.mm has no control over content contained within. Furthermore, dotproperty.com.mm cannot guarantee the accuracy of listing information, linked content or associated resources provided by agencies or developers for the purpose of advertising.